Fotoana fohy taorian’io fanehoan-kevitr’ireo andiana senatera io, dia nanao setriny ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, raha nahare ny fanambarana nataon’ny Loholona vitsivitsy mahakasika ny fitoriana napetraka teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalam-panorenana.
Nanao fanamarihana i Rivo Rakotovao fa tamin’ny fotoam-pivoriana azon’ny besinimaro natrehana ny zoma 13 desambra 2019, sady famaranana ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa dia noresahina tao fa tsy maintsy hanao “saisine” eny amin’ny HCC ny Antenimierandoholona mahakasika ireo didy hitsivolana tokony handalo fankatoavana (ratification) eny anivon’ny Antenimiera roa tonta. Tsy nisy nitsipaka izany ny loholona rehetra izay tonga nanatrika ny fivoriana.
Mialoha izany anefa, hoy hatrany ny fanazavana, nandritra ny asam-baomiera izay natrehan’ny solotenan’ny Primatiora tao amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona dia nanontaniana ity farany ny mahakasika ny “ratification” an’ireo didy hitsivolana ireo ka nanambara fa “efa eo am-pandinihana azy ry zareo”.
Nomarihany fa, na tsy nanatrika fivoriana ireo Loholona nanao fanambarana ireo, na tsy nihaino tsara. Aleo ny marina no lazaina, hoy ny Filohan’ny Antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Ireo Loholona izay nanao fanambarana moa dia ahitana Filoha lefitra saingy tsy tonga manatrika ny fivorian’ny Birao Maharitra.
Ny Antenimierandoholona dia miasa mafy ho an’ny fametrahana ny tany tan-dalàna ka noho izany tsy miray tsikombakomba amin’ny tsy fanarahan-dalàna, hoy hatrany i Rivo Rakotovao.
Tsiahivina fa ny andininy faha-3 amin’ny fanapahana laharana faha-5 HCC/D3 tamin’ny 13 febroary 2019 mahakasika ny lalàna laharana 2019-001, izay manome fahefana ny Filohan’ny Repoblika hanao lalàna, dia manambara fa ny volavolan-dalàna fankatoavana ireo didy hitsivolana dia tsy maintsy mandalo eny amin’ny Antenimiera mandritra ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana faharoa amin’ny taona 2019.